အသီးအရွက်တွေထပ်စားဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ မျိုးူ - Hello Sayarwon
အသီးအရွက် လူ့ခန္ဓါကိုယ်အတွက် သံသယဖြစ်စရာမလိုလောက်အောင်ပင်ကောင်းသည်။ ထိုကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ပုံမှန်အစားအသောက်တွင်ပါသင့်သည်။ ဒီဆောင်းပါးသည် အသီးအရွက်ကို အစားအသောက်တွင်မည်သို့ထည့်စားရမည်ဟူသော ၁၀ချက်ကိုဖော်ပြပေးသည်။
လူတော်တော်များများက ကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ရန် အချိန်မရှိဟုဆိုကာုအသီးအရွက်စားရန် တွန့်ဆုတ်နေတတ်သည်။ သို့သော် လတ်ဆတ်သော သို့မဟုတ် ခဲထားသောအသီးအရွက်များကိုမိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖိုထဲတွင်ထည့်ပြိး အမြန်ချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ ပြုတ်ထားသော မှန်လာဥ ပဲသီး သို့မဟုတ် ဘော့ ချိုင်ကို ရေနည်းနည်းထည့်ပြိး မိုင်ကရိုဝေ့တွင်ထည့်ခြင်းက လွယ်ကူပြီး ချက်ရအဆင်စေသည်။
အသီးအရွက်ချက်ပြုတ်ရန်မသေချာဖြစ်နေပါကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဥပမာ လုံလောက်သော ပန်းမှန်လာဥ ပန်းဂေါ်ဖီ သို့မဟုတ် ငရုတ်သီးကိုလှီးထားပြီး ရေခဲသေတ္တာထည့်ထားပါ။ သင်စားလိုသောအချိန်တွင်လွယ်ကူစွာစားနိုင်သည်။
အရောင်တောက်သော ဥပမာ အနီ အစိမ်းရင့် နှင့်လိမ္မော်ရောင်ပါသော အရွက်များက ဗီတာမင်နှင့် မင်နရယ်များစွာပါသည်။ ချယ်ရီ အာလူး ခရမ်းချဉ်သီး မှန်လာဥ နှင့် ပဲသီး တို့ကိုစားနိုင်သည်။ ထိုမှသာမက အစားအသောက်စားလိုစိတ်ကိုမြင့်စေပြီး အရောင်စုံစေသည်။
အအေးခံထားသောအရွက်က လွယ်ကူပြီးလတ်ဆတ်သောအရွက်များကဲ့သို့ အာဟာရပြည့်ဝသည်။ သို့သော် ဗီတာမင်နှင့်မင်နရယ်ဆုံးရှုံးမှုနည်းစေရန် အချိန်ခဏတာအတွင်းစားသင့်သည်။ လတ်ဆတ်သောအရာက် ဥပမာ ပဲ ဟင်းနုနွယ် သို့မဟုတ် ပြောင်းဖူးတို့က အနံအရသာကိုကောင်းစေပြီး သင့်အစားအသောက်စနစ်ကိုအကူအညီဖြစ်စေသည်။
သင်အရွက်စားလိုပြီး ထွက်ဝယ်ဖို့အချိန်မလုံမလောက်ဖြစ်နေပါသလား။ ကြိုတင်သိုလှောင်ထားခြင်း သွပ်သွင်းထားသော အသီးအရွက်များက အာဟာရပြည့်စေရုံသာမက ကြာရှည်လည်းခံသည်။
အသီးအရွက်သုပ်က အရသာရှိသည် သို့သော် ပိုစားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ထောပတ်သီး မှန်လာဥ ဂေါ်ဖီ ငရုတ်ကောင်းတို့ထည့်သုပ်စားသောက်ပါက အရသာရှိပုံရလိမ့်မည်။
အသီးအရွက်အစိမ်းကိုမကြိုက်ပါက စွပ်ပြုတ် ဟင်းရည် ဆန်ပြုတ် ကိုသင်ကြိုက်သောအသီးအရွက်နှင့်လုပ်နိုင်သည်။
အပြင်မှာစားပါက အကြော်အစား အသီးအရွက်သုပ်ကို နှုတ်မြိန်စာအဖြစ်မှာသင့်သည်။
ရာသီအလိုက်မဟုတ်သောအစားများက အကောင်းဆုံးအရသာပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု အာမမခံနိုင်ရုံမက ဈေးလဲပိုကြီးသည်။
အသီးအရွက်အစုံကိုစားပါ။ လူသိများသော အစားအသောက်ချက်ပြုတ်စာအုပ်ကို ဝယ်ပါ။ သင်ဟင်းတွင်ပါသောပစ္စည်းမျိုးစုံရှိနေပါက ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြည့်ဝဟင်းချက်ပြုတ်ရန်ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။
10 Tips: Add More Vegetables to Your Day. https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-add-more-vegetables-to-your-dayAccessed February 17, 2017
10tipsto help you eat more vegetables. https://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/dietary_guidelines_for_americans/DGTipsheet2AddMoreVegetables.pdfAccessed February 17, 2017
12 Ways to Eat More Vegetables and Fruit. http://www.cookinglight.com/healthy-living/healthy-habits/eat-vegetables-fruitsAccessed February 17, 2017